वास्तविकरुपमै कछुवाले खरायोलाई दौडमा हरायो !(भिडियोसहित) - Karnalipatra
वास्तविकरुपमै कछुवाले खरायोलाई दौडमा हरायो !(भिडियोसहित)
कर्णालीपत्र संवाददाता २४ श्रावण २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
काठमाडौं, २४ साउन । हामीले विद्यालयमा पढ्दा खरायो र कछुवाको कथा सुनेकै थियौँ । कथामा कछुवाले आफ्नो गतिमा यात्रा गर्ने र खरायोले घमण्डका कारण बाटोमै आराम गर्दा कछुवाले दौड जितेको थियो । आम नेपालीले यो कथालाई पटक पटक भन्ने गर्छन् । वृद्धवृद्धाले बालबालिकालाई सम्झाउनका लागि यो कथा धेरै पटक प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रतिस्पर्धाको भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियोमा कछुवा र खरायोको दौड प्रतियोगितामा कछुवाले बिस्तारै हिँडेर खरायोलाई जित्छ । यो भिडियो सयौँले सेयर गरेको नागरिक खबर अनलाईनले लेखेको छ ।
३९ सेकेण्डको यो भिडियोमा दजनौँ व्यक्तिले हुडिङ गरेको सुन्न र देख्न सकिन्छ । सुरुवातमा तिब्र गतिमा अगाडि बढेको खरायो बिस्तारै रोकिन्छ । तर, कछुवाले भने बिस्तारै आफ्नो गति अगाडि बढाउँछ । अन्तिममा कछुवाले फिनिसिङ लाइन पार गरेर विजेता बन्छ ।
Family tradition comes before personal reputation ☺️ pic.twitter.com/UvWh9JuBJV
— Arun Bothra (@arunbothra) August 6, 2020
गर्भवती श्रीमतीको परीक्षाका लागि स्कूटरमा पार गरे १२ सय किलोमिटरको यात्रा
कुखुराको भाले आठ महिनापछि प्रहरी हिरासतबाट रिहा
बिहे गरेको तीन महिनापछि श्रीमान आफ्नै हजुरबुबा भएको थाहा पाएपछि
गाइजात्रा विशेषमा व्यङ्ग्य गर्दै कलाकारले भने– नेताहरु ३६५ दिन नै गाइजात्रा झिक्छन्
कुखुराको भालेले आक्रमण गर्दा एक महिलाको मृत्यु
श्रीमतीका थिए १४ प्रेमी, श्रीमानले सबैसँग मागे १०० करोड क्षतीपूर्ती
समाचार पढ्दापढ्दै समाचारवाचिकाको दाँत फुस्कियो‘
बेहुला बेहुलीका लागि हिराको मास्क, बिक्री धमाधम